မြန်မာကျပ်ငွေကို ၁၉၅၂-ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ(၁)ရက်တွင် စတင်ခဲ့သည်။ တစ်ကျပ်လျှင် တစ်အိန္နိရူပီးနှင့် တူညီသည်ဟုသတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင် US$1=4.7619 Kyat = 4.7619 Indian Rupees ပေါက်ဈေးရှိသည်။ သို့သော် ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်တစ်ဒေါ်လာမှာ အိန္နိယရူပီး ၄၉.၅ သာရှိသော်လည်း၊ မြန်မာကျပ် ၇၅၀ ဖြစ်ခြင်းမှာ မြန်မာငွေကြေးမတည်ငြိမ်မှုကို ပြသလျက်ရှိသည်။
ပျူခေတ်၊ ဟန်လင်း၊ ဗိဿနိုးနှင့် သရေခေတ္တရာခေတ်တို့တွင် ဟန်လင်းဒင်္ဂါးများကို ကျပ်စေ့၊ ငါးမူးစေ့၊ မတ်စေ့၊ မူးစေ့ဟူ၍၎င်း၊ နွားလားဥဿဘ၊ သပြေညွှန့်နှင့် မင်းအမည်ခပ်နှိပ်ထားသော ရခိုင်ဒင်္ဂါးများနှင့် ဟင်္သာရုပ်ပါ ရှိသည့် မွန်ဒင်္ဂါးများကို၎င်း ငွေကြေးအဖြစ် ထုတ်ဝေသုံးစွဲခဲ့သည်ကို အထောက်အထားများ တွေ့ရှိရပြီး ပုဂံခေတ်၊ အင်းဝခေတ်တို့တွင် ငွေတုံးငွေခဲများကိုသာ အစိတ်သား၊ နှစ်ဆယ်သား၊ တဆယ်သား စသည်ဖြင့် ပြုလုပ်သုံးစွဲခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ ကုန်းဘောင်ခေတ်၏ ဘိုးတော်ဘုရားလက်ထက်တွင် ခေတ်မီ မြန်မာ့ဒင်္ဂါးများကို ကာလကတ္တားမြို့တွင် သွန်းလုပ်သုံးစွဲခဲ့သည်။ ၎င်းတို့မှာ မြန်မာဒင်္ဂါး၊ ရခိုင်ဒင်္ဂါး၊ ဝေသာလီဒင်္ဂါး၊ ကုလားဒင်္ဂါးတို့ ဖြစ်သည်။ ဘကြီးတော် သာယာဝတီနှင့် ပုဂံမင်းတို့လက်ထက်တွင်လည်း ထိုလေးမျိုးကိုပင် သုံးစွဲခဲ့ကြသည်။
၁၉၄၄ ခုနှစ်တွင် ဗမာနိုင်ငံတော်ဘဏ်သည် ၁ ကျပ်၊ ၅ ကျပ်၊ ၁၀ ကျပ်နှင့် ၁၀၀ ကျပ်တန် ငွေစက္ကူများကို ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး ၁၉၄၅ ခုနှစ်တွင် ၁၀၀ ကျပ်တန် ငွေစက္ကူသစ်ကိုလည်း ဆက်လက်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
၁၉၅၂ ခုနှစ်တွင် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံဘဏ်သည် ငွေကြေးအုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့၏ တစ်ဦးတည်း ငွေကြေးထုတ်ဝေခွင့်ကို ငွေကြေးဌာနသို့ အသစ်ဖွဲ့စည်းလွှဲပြောင်းခဲ့သည်။ အရေးပါသော ပြောင်းလဲမှုမှာ ဒဿမစိတ်ငွေကြေးစနစ်သို့ ပြောင်းလဲစေခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ၁၉၅၈ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၂ ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံဘဏ်သည် ၁ ကျပ်၊ ၅ ကျပ်၊ ၁၀ ကျပ်နှင့် ၁၀၀ ကျပ်တန်များကို ပထမဆုံး ကျပ်ငွေစက္ကူအဖြစ် စတင် ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ အဆိုပါ ကျပ်ငွေစက္ကူများသည် နောက်ဆုံးထုတ်ဝေခဲ့သော ရူပီးငွေစက္ကူများနှင့် ဒီဇိုင်းအလွန်တူညီခဲ့သည်။ ၁၉၅၈ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၂၁ ရက်နေ့တွင် ၂၀ ကျပ်နှင့် ၅၀ ကျပ်တန် ငွေစက္ကူများကို ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ၅၀ ကျပ်နှင့် ၁၀၀ ကျပ်တန် ငွေစက္ကူများကို ၁၉၆၄ ခုနှစ် မေလ ၁၇ ရက်နေ့တွင် တရားမဝင်ငွေကြေးအဖြစ် ကြေညာခဲ့သည်။
၁၉၇၂ ခုနှစ်တွင် ပြည်သူ့ဘဏ်မှ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံဘဏ်အဖြစ် အမည်ပြောင်းလဲခဲ့ပြီး ၂၅ ကျပ်တန် ငွေစက္ကူကို ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ၁၉၇၂ ခုနှစ်မှ ၁၉၇၉ ခုနှစ်အတွင်း ၁ ကျပ်၊ ၅ ကျပ်၊ ၁၀ ကျပ်၊ ၂၅ ကျပ်၊ ၅၀ ကျပ်နှင့် ၁၀၀ ကျပ်တန် ငွေစက္ကူများကို ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ငွေစက္ကူများကို ဂျာမနီ Giesecke & Devrient ၏ နည်းပညာလမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်း ဝါဇီလုပ်ငန်းစက်ရုံတွင် ရိုက်နှိပ်ခဲ့သည်။
၁၉၈၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့တွင် ၅၀ ကျပ်နှင့် ၁၀၀ ကျပ်တန် ငွေစက္ကူများကို သတိပေးခြင်းမရှိဘဲ ရုတ်သိမ်းခဲ့သည်။ အများပြည်သူအား ငွေစက္ကူအဟောင်းများအား အသစ်ဖြင့် လဲလှယ်ခြင်းကို အကန့်အသတ်ဖြင့်သာ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အခြားသော ထုတ်ဝေထားသည့် ငွေကြေးများသည် တရားဝင်ဆက်လက်သုံးစွဲခွင့်ရှိဆဲ ဖြစ်သည်။ ၁၉၈၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့တွင် ၇၅ ကျပ်တန် ငွေစက္ကူကို စတင်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ဗိုလ်ချုပ်ဦးနေဝင်း၏ ဂဏန်းဗေဒင်ယုံကြည်မှုကြောင့် တန်ဖိုး မဂဏန်းဖြင့် ငွေစက္ကူများကို ထုတ်ဝေခဲ့ခြင်း ဖြစ်နိုင်ပြီး ၇၅ ကျပ်တန်ကို ဦးနေဝင်း၏ ၇၅ နှစ် မွေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ၁၉၈၆ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့တွင် ၁၅ ကျပ်နှင့် ၃၅ ကျပ်တန် ငွေစက္ကူများကို ဆက်လက်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
နှစ်နှစ်ခန့်အကြာ ၁၉၈၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့တွင် ၂၅ ကျပ်၊ ၃၅ ကျပ်နှင့် ၇၅ ကျပ်တန် ငွေစက္ကူများကို အသိပေးချက် တစ်စုံတစ်ရာမရှိဘဲ အသုံးပြုမှု ရုတ်သိမ်းခဲ့ပြန်သည်။ နိုင်ငံတွင်း လည်ပတ်နေသော ငွေကြေး၏ ၇၅%ခန့် တန်ဖိုးမရှိဖြစ်သွားကာ နိုင်ငံသားများ၏ စုဆောင်းထားမှုများ ပျက်သုန်းခဲ့ရသည်။ ၁၉၈၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၂ ရက်နေ့တွင် ၄၅ ကျပ်နှင့် ၉၀ ကျပ်တန် ငွေစက္ကူများကို ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ စီးပွားရေးမငြိမ်မသက်မှုများမှ အဓိကရုဏ်းများစွာ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင် ဗိုလ်ချုပ်စောမောင်က နိုင်ငံတော် အာဏာကို သိမ်းယူခဲ့သည်။
၁၉၈၉ မှ လက်ရှိ
၁၉၈၉ ခုနှစ် ဇွန်လ ၂၀ ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံအမည်အား မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြောင်းလဲမှုနောက်ပိုင်းတွင် ငွေစက္ကူအသစ်များကို ထုတ်ဝေရန် ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ယခုအကြိမ်တွင် ငွေစက္ကူဟောင်းများအား ရုတ်သိမ်းခြင်း မပြုခဲ့ဘဲ ဟောင်းနွမ်းလာပြီး အသုံးပြုခြင်း နည်းပါးအောင်သာ ထားရှိခဲ့သည်။ ၁၉၉၀ ခုနှစ် မတ်လ ၁ ရက်နေ့တွင် ၁ ကျပ်ကိုလည်းကောင်း၊ မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့တွင် ၂၀၀ ကျပ်တန်ကိုလည်းကောင်း ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ၁၉၉၄ ခုနှစ် မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့တွင် ၅၀ ပြား၊ ၂၀ ကျပ်၊ ၅၀ ကျပ်၊ ၁၀၀ ကျပ်နှင့် ၅၀၀ ကျပ်တန် ငွေစက္ကူများကိုလည်းကောင်း၊ ၁၉၉၅ ခုနှစ် မေလ ၁ ရက်နေ့တွင် ၅ ကျပ်တန်နှင့် ၁၀ ကျပ်တန် ငွေစက္ကူသစ်များကိုလည်းကောင်း ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ၁၉၉၈ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ တွင် ၁၀၀၀ ကျပ်တန် ငွေစက္ကူကို စတင်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံအဝှမ်းတွင် ငွေကြေးအသုံးပြုမှု ရုတ်သိမ်းမည်ဟူသော ကောလဟာလများ ပေါ်ထွက်လာခဲ့ကာ အစိုးရက တရားဝင်ငြင်းဆိုခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ထိုအကြိမ်တွင် ငွေကြေးရုတ်သိမ်းခြင်း မဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပေ။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် ၂၀၀ ကျပ်၊ ၅၀၀ ကျပ်နှင့် ၁၀၀ ကျပ်တန် ငွေစက္ကူများကို အရွယ်အစား ချုံ့ကာ (ငွေစက္ကူများ၏ အရွယ်အစား တပြေးညီဖြစ်စေရန်) ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး ယခင်အရွယ်အစားကြီး ငွေစက္ကူများကိုလည်း ဆက်လက်သုံးစွဲခွင့် ပြုခဲ့သည်။ ၅၀ ပြား၊ ၁ ကျပ်၊ ၅ ကျပ်၊ ၁၀ ကျပ်နှင့် ၂၀ ကျပ်တန် ငွေစက္ကူများမှာ တန်ဖိုးနည်းပါးခြင်းကြောင့် ရှားပါးပြီး တွေ့မြင်နိုင်ရန် ခက်ခဲသည်။
၁၉၃၇ ခုနစ်မှ ၁၉၄၅ ခုနစ်အထိ ထုတ်ဝေခဲ့သော ငွေစက္ကူပုံများ
၁၉၄၈ ခုနစ်မှ ၁၉၈၇ ခုနစ်အထိ ထုတ်ဝေခဲ့သော ငွေစက္ကူပုံများ
ရှေ့သို့စာစောင် အတွဲ(၉)အမှတ်(၉)၁.၁၀.၆၆၊ စာ-၄
ဦးမြင့်စော (သမိုင်းပါမောက္ခ၊ ပုသိမ်တက္ကသိုလ်) (မင်္ဂလာမောင်မယ်-၂၀၁၀-ခု ဇူလိုင်လ)
Series of Bank Notes and Coins - Central Bank of Myanmar။
Photographic image (JPG)။
History of Bank Notes - Central Bank of Myanmar။
Linzmayer၊ Owen (2012)။ "Myanmar"။ The Banknote Book။ BanknoteNews.com။ San Francisco, California။
New Myanmar kyat note။
Some Interesting Facts About Paper Money။
"Get complete access to The Washington Post online - it's FREE!"၊ The Washington Post၊7June 2012။
Myanmar new 10,000-kyat note confirmed။
Myanmar new 1,000-kyat note (B119a) confirmed BanknoteNews (https://banknotenews.com). January 12, 2020. Retrieved on 2020-06-27.
Myanmar: New 500-kyat banknote depicting national hero of liberation, Aung San Coin Update (news.coinupdate.com). June 22, 2020. Retrieved on 2020-06-27.
Banknote World - World Currency & Paper Money Collectors။ 14 April 2008 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 30 January 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Banknote World - World Currency & Paper Money Collectors။ 28 June 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 30 January 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Central bank to circulate 'Bogyoke Aung San' 1000-Kyat note။
Myanmar new 5,000-kyat note confirmed။
Burma to issue 10,000-kyat banknote (31 May 2013)။